Nhau - Kukosha kwemushonga kwemhuka dzesango kwakaderera uye njodzi yakakwira. Kuvandudzwa kwemishonga yemakwenzi neyekugadzira kunogona kubatsira kugadzirisa dambudziko riri mumaindasitiri
“Pakazara, pane marudzi gumi nemazana masere makumi masere neshanu ezvigadzirwa zvemushonga zveChinese nemhando yemishonga yemhuka inokwana chiuru nemazana mashanu ane mazana masere neshanu, zvinosvika zvikamu gumi nezviviri kubva muzana. Pakati pezvinhu izvi, mazana gumi nematanhatu emhuka dzesango ari panjodzi. Pakati padzo, nyanga yechipembere, tiger bone, musk uye bere yeupfu inofungidzirwa semishonga isingawanzo kurapa yemusango. ” Huwandu hwevamwe mhuka dzesango dziri panjodzi, senge pangolin, tiger nembada, dzaderera zvakanyanya nekuda kwekudiwa kwemishonga yekurapa, akadaro Dr. Sun Quanhui, musayendisiti weWorld Animal Protection Society, pamusangano wehunyanzvi we2020 Yevanhu ”munaNovember 26.
Mumakore achangopfuura, inotungamirwa nekutengeserana kwepasirese uye zvido zvekushambadzira, mhuka dzesango dzisingawanzo kuwanikwa uye dziri panjodzi kazhinji dzinotarisana nekumanikidzwa kukuru kwekupona, uye kudiwa kukuru kwekushandisa kwemishonga yechinyakare ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekutsakatika kwavo.
"Kurapa kwemhuka dzesango kwakanyanyisa," akadaro Sun. Munguva yakapfuura, mhuka dzesango dzaisave nyore kuwana, saka zvekurapa zvaive zvishoma, asi izvo hazvireve kuti mishonga yavo yaive yemashiripiti. Zvimwe zvirevo zvekunyepa zvekutengesa zvinowanzoshandisa kushomeka kwemishonga yemhuka sango senzvimbo yekutengesa, ichitsausa vatengi kutenga zvigadzirwa zvinoenderana, izvo zvinongomutsa kuvhima uye kuberekesa kwemhuka dzesango, asi zvakare zvinowedzera kusimudzira kudiwa kwemishonga yemusango mhuka.
Sekureva kweshumo, zvekuChinese zvekurapa zvinosanganisira mishonga yemakwenzi, mamineral mishonga uye mishonga yemhuka, pakati payo mishonga yemakwenzi inosvika zvikamu makumi masere kubva muzana, zvinoreva kuti mhedzisiro yemishonga yemusango inogona kutsiviwa nemhando dzakasiyana dzemishonga yechiChinese. Munguva dzekare, mishonga yemhuka dzesango yanga isingawanikwe nyore, saka yanga isinga shandiswe zvakanyanya kana kuiswa mune akawanda mabikirwo. Zvinotendwa nevanhu vazhinji nezvemushonga wemusango zvinobva pane "kushomeka kwakakosha" kufunga zvisirizvo kwekuti mushonga unoshamisa, unoshanda zvakanyanya uye unokosha zvakanyanya.
Nekuda kweiyi pfungwa yevatengi, vanhu vachiri kuda kubhadhara mari yakawanda kune zvigadzirwa zvemusango kubva musango nekuti ivo vanotenda kuti vari nani kupfuura mhuka dzakarimwa, dzimwe nguva kana mhuka dzesango dzakarimwa dzatove pamusika nekuda kwekurapa. Naizvozvo, kuvandudzwa kwemaindasitiri ekurima mhuka dzesango hakuzochengetedze mhuka dziri panjodzi uye kuchawedzera kudikanwa kwemhuka dzesango. Chete nekudzora kudiwa kwekudyiwa kwemhuka dzesango ndipo patinogona kupa dziviriro inoshanda kwazvo kune mhuka dzesango dziri panjodzi.
China yakagara ichisimbisa kukosha kukuru kudziviriro yemhuka dzesango dziri mungozi. Mune runyorwa rwezvinhu zvekurapa zvemusango pasi pekudzivirirwa kwekiyi yenyika, zvisikwa gumi nematanhatu zvemhuka dziri pasi penyika chengetedzo yakakosha zvakanyorwa, uye zvakakamurwa kuva yekutanga kirasi neyechipiri kirasi mishonga yekurapa. Pamhando dzakasiyana dzemushonga wemhuka dzesango, mashandisiro uye matanho ekudzivirira ekirasi I neClass II zvekurapa zvinotsanangurwa.
Pakutanga kwa1993, China yakarambidza kutengeserana uye kushandiswa kwemishonga yechipembere nenyanga yeingwe, uye ikabvisa mishonga yekurapa inoenderana neiyo pharmacopoeia. Bear bile yakabviswa kubva ku pharmacopoeia muna 2006, uye pangolin yakabviswa kubva muchinyorwa chazvino muna 2020. Mukumira kwe COVID-19, National People's Congress (NPC) yakafunga kudzokorora mutemo weWildlife Protection wePeople's Republic of China. (PRC) kechipiri. Pamusoro pekurambidza kudyiwa kwemhuka dzesango, ichasimbisa denda rekudzivirira uye kuchengetedzwa kwemutemo kweindasitiri yemishonga yemusango.
Uye kumakambani emishonga, hapana mukana mukugadzira nekutengesa mishonga uye zvigadzirwa zvehutano zvine zvigadzirwa kubva kumhuka dzesango dziri panjodzi. Chekutanga pane zvese, pane kukakavara kukuru nezvekushandiswa kwemhuka dzesango dziri mungozi semushonga. Kechipiri, kusaenzanisirwa kuwana kune mbishi zvigadzirwa kunotungamira kune isina kugadzikana mhando yezvinhu zvakasvibirira; Chechitatu, zvinonetsa kuwana zvakaenzana kugadzirwa; Chechina, kushandiswa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya uye mimwe mishonga mukurima kunoita kuti zviome kuona mhando yezvigadzirwa zvemhuka dzesango dziri panjodzi. Izvi zvese zvinounza njodzi huru kumusika tarisiro yemabhizinesi anoenderana.
Maererano nemushumo "The Impact of Abandoning endangered Products of Wildlife Products on Companies" yakaburitswa neWorld Society for the Protection of Animals uye Pricewaterhousecoopers, mhinduro ingangodaro ndeyekuti makambani anokwanisa kugadzira nekutsvaga zvigadzirwa zvemakwenzi uye zvekugadzira kutsiva zvigadzirwa zvemhuka dzesango zviri panjodzi. Izvi hazvisi chete zvinodzora zvakanyanya bhizinesi njodzi yebhizinesi, asi zvakare zvinoita kuti mashandiro ebhizinesi awedzere kugadzikana. Parizvino, zvinotsiva mhuka dzesango dziri panjodzi dzekushandisa pakurapa, senge yekuisira tiger mapfupa, yekunyepedzera musk uye yekunyepera bere bile, vatengeswa kana vari kuitiswa kiriniki miedzo.
Bear bile ndeimwe yemakwenzi anoshandiswa zvakanyanya emhuka dzesango dziri mungozi. Nekudaro, ongororo yakaratidza kuti akasiyana maChinese herbs anogona kutsiva bere bile. Iyo tsika isingadzivisike mune ramangwana kukura kweindasitiri yemishonga kusiya mhuka dzesango uye kushingairira kuongorora mishonga yemakwenzi uye zvigadzirwa zvekugadzira. Mabhizimusi anoshanda anofanirwa kutevedzera mutemo wepasi rose wekuchengetedza mhuka dzesango dziri panjodzi, kudzikisira kuvimba kwavo nemhuka dzesango dziri panjodzi, uye nekuenderera mberi nekuvandudza kugona kwavo kwakasimba vachichengetedza mhuka dzesango dziri panjodzi kuburikidza nekushandurwa kwemaindasitiri uye hunyanzvi hwehunyanzvi.